Pants wear Workwear • ọkachamara P&M kọmputa embroidery
Dungarees bụ otu n'ime ihe eji arụ ọrụ ejiji na-ewu ewu na igwe, ụlọ ọrụ mmepụta ma ọ bụ maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ. Ha na-mgbe dechara dị ka ahụ ike na nchekwa uwe ya na ajị anụ na ọkaraA na-eji ha eme ihe ọ bụghị naanị na mpaghara ọrụ gọọmentị, kamakwa maka ebumnuche nkeonwe.
A na-eji akwa akwa nwere akwa dị elu nke anyị na-enye n'onyinye anyị. N'ihi atụmatụ ndị a, ha na-eguzogide ịsa na okpomọkụ dị elu, ma na-echekwa ihe onwunwe ha n'oge. Ejiri ihe nwere ike ime ka uwe ogologo ọkpa ahụ: bọtịnụ na eriri nwere eriri na-agbanwe, si otú a na-enyere ha aka imegharị ndị mmadụ nwere ụdị ahụ dị iche iche. Tụkwasị na nke a, ha ejirila ihe nkwụnye ụgwọ ndị a na-agbanwe agbanwe.
Dungarees - nhọrọ buru ibu maka nkasi obi nke oru
Ngwurugwu ahụ gụnyere uwe ogologo ọkpa maka ọrụ na obere okpomọkụ n'oge oyi (ụlọ anaghị ekpo ọkụ, ọrụ n'èzí). Anyị na-enyekwa uwe nwere ihe ndị na-atụgharị uche iji hụ na nchekwa n'oge ọrụ mgbe ọchịchịrị gbara ma ọ bụ na oghere ọha.
Dungarees ha nwere akpa dị mma, ụfọdụ ụdị na-ejikwa obere akpa ndị ọzọ na ikpere, nke na-enye gị ohere itinye na ha ntinye nke na-eme ka nkasi obi dịkwuo ike n'oge ọrụ nke chọrọ ikpere ikpere na ogologo oge.
N'etiti uwe ogologo ọkpa ị ga-ahụ ọtụtụ ụdị dabere na ọnọdụ ọrụ na ọkwa mmadụ n'otu n'otu: ogologo-ukwu, uwe elu, ọkachamara na akwa akwa.
N'ime ụlọ ahịa dị iche iche pm.com.pl enwere ogologo ọkpa emere maka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ihe owuwu, ndị na-edozi ya na ndị na-elekọta ubi. Agbanyeghị, iji ha eme ihe zuru oke maka ọrụ nzuzo dị ka ịkọ ugbo, dị ka uwe na-echekwa uwe kwa ụbọchị megide unyi, dịka ọmụmaatụ n'oge nrụzigharị ụlọ ma n'ọtụtụ buru ibu na-echebe megide obere okpomọkụ.
Nye ụlọ ọrụ gị otu njiri mara ya
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ekele maka ya aha mmadu ya na onwe ya, karịchaa ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ nnọchite anya na kọntaktị na ndị ọrụ ngo na ndị ahịa nwere ike ịbanye. Ọ bụ n’uche anyị ka anyị na-enye nhọrọ nke ịtụ ha na trousers maka ahaziri mmadụ ọhụụ na nke mara mma ihe mkpuchi kọmputa. Mgbakwunye bụ otu n'ime usoro kachasị eji akara akara, nke zuru oke maka uwe achọrọ ịsa aka mgbe niile.
Allegro trouza ọrụcastorama trousers ọrụuwe ụmụ nwanyị na-arụ ọrụotu esi asa akwa ọrụkedu ihe ezigbo uwe ogologo ọkpa bụgịnị na-arụ ọrụ ogologo ọkpaihe na-arụ ọrụ ogologo ọkpa ịzụtaihe na-arụ ọrụ ogologo ọkpa maka oge ọkọchịkedu ụdị uwe ị na-atụ arojula ọrụ nsịọrụ ogologo ọkpaakwa mkpuchi ọrụ mkpuchiha abụọ na-arụ ọrụtrouzoli olxọrụ dungareesdungareesna-arụ ọrụ trouzas allegroIhe eji arụ ọrụ betana-ebu ibucastorama trousers ọrụọrụ trouzas catkpochapụwo ọrụ trouzasuwe ụmụ nwanyị na-arụ ọrụdebitt ọrụ trouzaseriri akwa ogologo ụkwụengelbert strauss workusersarụ ọrụ ebe a ga-azụtana-eyi akwa dị ka uweọrụ trouzas gịnịakwa akwa ị nwere ike ịkwadonke na-arụ ọrụ nkedo ịhọrọjeans na-arụ ọrụ trouzasjula ọrụ nsịuwe mkpụmkpụ ọrụ mkpụmkpụleber & hollman na-arụ ọrụ traụzaNdị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ masịrị merlinIdlọ ọrụ eji arụ ọrụ Lidluwe ọrụ ụmụ nwoketroter ọrụ ọrụcamo work trousersjiri eriri aka rụọ ọrụtrouzas trouzas neouwe ọrụ na-acha anụnụ anụnụIhe eji arụ ọrụ Germanwork trousers obiebe a na-adọba ụgbọalatrousers ọrụ na-egosipụtadungarees na-arụ ọrụ trouzasọrụ dungarees 100 owucastorama dungareestrouzoli olxebe a na-arụ ọrụ ebe atroupa ọrụ n’oge oyi